Sawirro: Wasaaradda Dastuurka Oo Kulan Wadatashi Ah La Yeelatay Aqoonyahannada Soomaaliyeed – Goobjoog News
Kulan wadatashi ah oo u dhaxeeyay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirka ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii ay Wasaaradda u dhageeysan laheeyd talooyinka Aqoonyahanada ee ku saabsan Geedi-socodka dib-u-eegista Dastuurka.
Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Aqoonyahnada ay kaalin weyn uga banaantahay ka qaybqaadashada Geedi-socodka.
“Aqoonyahanada waa indhaha iyo maskaxda bulshada, waxaa Geedi-socodka idinkaga banaan kaalin ballaaran oo ay tahay in aad buuxisaan; Wasaaraddu waxa ay mar walba diyaar u tahay in ay idiin dhageeysato” ayuu yiri AVV Cabdi Xoosh.
Sidoo kale Wasiirka isaga oo ka hadlayay muuhimadda ay leeyihiin kulamada wadatashiga ayuu yiri “Kulamada noocan oo kale ah waxa ay muhiim u yihiin in Geedi-socodka uu noqdo mid ka qaybgalkiisu loo dhanyahay oo daah-furnaan ku saleeysan; Waa labadaa mabd’a waxa ay Wasaaradda ku shaqeyneyso”.
Ugu damabeyn, Mudane Xoosh ayaa ka codsaday Aqoonyahanada Soomaaliyeed ee kulanka ka soo qaybgalay in ay marwalba talooyinkooda la wadaagaan Wasaaradda.